5 yesarudzo dzakanakisisa kuGitHub kuitisa mapurojekiti ako | Linux Vakapindwa muropa
Kutevera nhau dze GitHub kutenga neMicrosoft mazuva mashoma apfuura Mazana evakagadziri vaive nemapurojekiti avo akaitirwa paGitHub vakatanga kutama yemapurojekiti ako pamwe nekutangisa kuvabvisa kuGitHub.
Ichi Izvo zvinokonzeresa pakutanga kusawirirana pamusoro pekutengeswa kweGitHub uye zvakafanana nenyaya yakapusa yekuti Microsoft ndiyo nyowani inoitisa izvi. Ndokusaka nhasi tichizopa dzimwe dzakanakisa dzimwe nzira kuGitHub mavanogona kutora zvirongwa zvavo.
Hapana mubvunzo imwe yeakanakisa sarudzo, GitLab sosi yakavhurika, ine simba, yakachengeteka sevhisi webhu, inoshanda, inoratidzika-yakapfuma uye yakasimba yeiyo vhezheni yekudzora uye yekudyidzana software kuvandudza kunoenderana neGit. Kuwedzera kune repository maneja, sevhisi yacho zvakare inopa wiki kubata uye neyebug yekutevera system.
Inotsigira zviitiko zveboka, kuburitsa tracker, inogadzirisika emabhodhi nenyaya nenyaya dzeboka, zvinofamba pakati pezvirongwa, nezvimwe.
Uyewo inoshandisa zvishandiso zvine simba zvebazi, matavi akachengetedzwa uye ma tag, kukiya faira, sanganisa zvikumbiro, zviyeuchidzo zvetsika, mepurojekiti yemigwagwa, nyaya dzekuremerwa, zvakavanzika uye zvine chekuita nenyaya, burndown machati eprojekti uye makuru ebasa.
Gogs ndizvo yemahara yakavhurwa sosi sevhisi inowanikwa pasi peMIT License chakareruka uye muchinjika-chikuva unomhanya chero kupi Go inogona kuumbika ye: Windows, Mac, Linux, ARM, nezvimwe.
Es nyore kuisa uye zvidiki zvakakwana kumhanya pane Raspberry Pi. Gogs ndiyo ingangoita iri nyore uye inokurumidza nzira yekumisikidza yako yakagadziriswa kodhi yekugadzirisa mhinduro.
Gitea ndizvo forogo inotarisirwa nharaunda yeGogs, iyo yega-inomiririra Git Gitea sevhisi yakasununguka zvachose. Izvi ndiweIyo isingaremi, kodhi-yakavakirwa kugadzirisa mhinduro yakanyorwa muGo uye yakaburitswa pasi peMIT rezinesi.
Iyo zvakare iri nyore uye inokurumidza nzira yekumisikidza yega-inomiririra Git sevhisi kune yakavhurwa sosi software kuvandudza.
Bitbucket iri a web-based hosting service, yemapurojekiti anoshandisa iyo Mercurial uye Git vhezheni yekudzvanya system. bitbucket inopa zvekutengesa uye zvemahara zvirongwa.
Iyi yeGit sevhisi inopa maakaundi emahara ane huwandu husingaverengeki hwezvakachengetedzwa zvega zvinogona kuva nevashandisi vanosvika vashanu mune maakaundi emahara, Zvivigiro zvepachivande hazviratidzwe pamapeji eprofile kana mushandisi achingova nezvakachengetedzwa zvakavanzika.
Bitbucket ine akati wandei akakosha maficha senge kutsvaga kodhi, kudhonza zvikumbiro, ine anoshanduka ekuendesa mamodheruKuona misiyano, smart mirroring, dambudziko rekutevera rinogona kugadziriswa paIP whitelisting uye mvumo yebazi yekuchengetedza kufamba kwako.
Beanstalk yakasimba, yakachengeteka, yepamusoro-mashandiro uye yakavimbika chikuva chekugadzirisa sosi kodhi zvinyorwa.
Beanstalk iri yakagadzirirwa kuvandudza yako yekufambisa yekufambisa uchishandisa zvinhu senge kodhi yekuongorora zvikumbiroKuburitsa tracker, repository stats, kusunungura manotsi, zviziviso, email pfupiso, kuenzanisa maonero, yakazara kuzvipira uye nhoroondo yekuchengetedza, uye zvimwe zvakawanda zviripo.
zvose data iro rinoendeswa kune server uye zvinopesana rinotamisirwa uchishandisa bhangi-giredhi encryption. Seyakavanzika SSAE 2 SOC 16 Type 1 nzvimbo, yayo data centre ine biometric uye kadhi yekuwongorora maprotocol pamwe nekuenderera mberi kwekutarisa.
Kuchengetedza inoitwa kuburikidza neyekuchengetera uye bazi rezvibvumirano, uye account chengetedzo kuburikidza nematanho-maviri echokwadi, IP yekuwana matandaiko kumisikidzwa kwemaphasiwedi akasimba uye IP yekumanikidza kurambidzwa. Inotsigira kuisirwa munzvimbo dzakawanda nemagadzirirwo etsika. Makambani akaita saPhillips, Intel, uye mamwe akawanda ari kushandisa Beanstalk
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » 5 dzakanakisa dzimwe nzira kuGitHub kuitisa mapurojekiti ako